रेखा थापाको आक्रोस - के मुस्कुराउनु वा सुन्दर हुनु अपराध हो र ? - Saptakoshionline
रेखा थापाको आक्रोस – के मुस्कुराउनु वा सुन्दर हुनु अपराध हो र ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ०९, २०७५ समय: १३:१२:३२
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकि एक चर्चित अभिनेत्री तथा र्निमात्री रेखा थापा ले सामाजीक संजाल मार्फत आक्रोस पोखेकी छन । एसिड प्रहार भएको १२ दिन पछि हिजो सम्झना दास को मुत्यु भएको थियो । सोही घटनालाई लिएर थापाले यस्तो आक्रोस पोखेकी छन । पढ्नुहोस उनले सामाजीक संजालमा व्यक्त गरेको आक्रोस……………………
एसिड प्रहार भएको १२ दिन पछि हिजो सम्झना दास सम्झनामा मात्र सिमित भएर सदाका लागि बिदा भइन् । बहिनी सुस्मिता अस्पतालमा उपचारत छिन् । चितवनमा बसन्ती परियारमाथि एसिड प्रहार भएको घटना आज बाहिरियो । उनको शरीरको २५ प्रतिशत भाग जलेको छ । यस्तो खबरले एकसाथ ममा अथाहा आक्रोश र आँशु पैदा गर्छ । सम्झनालाई हार्दिक श्रद्धान्जली अनि सुस्मिता र बसन्तीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु ।
महिलामाथि हुने हरेक हिंसाले विथोल्छ मलाई । त्यसमाथि एसिड भन्नासाथ शरीर नै उम्लन्छ, कहाली लाग्छ । त्यसैले ‘रुद्रप्रिया’ बनाएँ, एसिड पिडीत महिलाको साहस र प्रतिशोधको कथा भन्ने प्रयास गरें । त्यस फिल्मलाई मैले महिला हिंसा विरोधी अभियानकै रुपमा लिएको छु । तर हाम्ले जत्ति नै आधुनिक भयौं, महिला–पुरुषको विभेद हटायौं भने पनि ‘रुद्रप्रिया’हरु अझ जन्माइरहेका छौं । अचम्म त के भने, सम्झनाको ज्यानै जाँदा अनि बसन्ती मृत्युसँग लडिरहदा पनि विरोधका आवाज मुखरित भएका छैनन्, न उनीहरुको उपचार खर्चकै बारेमा कसैलाई चासो छ । त्यसमा दुई कारण छन् । एक, उनीहरु कथित तल्लो जातका हुन् । अर्को, विपन्न आर्थिक अवस्थाका पनि । त्यसैले त उनीहरुमाथि त्यतिविघ्न अन्याय हुँदा पनि हामी मौन छौं । यही घटना सहरको कुनै सम्पन्न परिवारमा हुँदो हो त ?
चाहे एसिड आतंक होस्, चाहे बलात्कार । गुदी कारण एउटै छ, जब केटीले केटाको इच्छा अस्वीकार गर्छिन्, तब कुनै न कुनै रुपको शारीरिक र मानसिक हिंसाको सिकार हुनैपर्छ । सम्झना र बसन्तीको हकमा त्यही भएको हो । अर्थात, समाजमा स्त्री भोग्या साधन नै हुन् सोच अझ प्रखर हुँदैछ । हाम्रो सुन्दरता नै हाम्रा लागि अभिषाप बनेको छ । के मुस्कुराउनु वा सुन्दर हुनु अपराध हो र ? यही पाराले हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौं ? ठन्डा दिमागले सोच्नु पर्छ । अपराधीलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय त हुनु पर्छ नै तर यत्तिले मात्र महिलामाथिको आतंक रोकिन्न । त्यसका लागि अभिभावक, परिवार र समाजले हरेक पुरुषलाई हरेक महिला र उनको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न सिकाउनु पर्छ । अन्यथा, ‘रुद्रप्रिया’ जन्मने श्रृंखला कहिल्यै रोकिने छैन । र, यसो हुनु भनेको, मानव सभ्यतालाई थप प्रदूषित र कंलकित पार्नु हो ।